Maamulka Jaamacadda Capital oo deeq dawo ah gaarsiiyey bukaanno ku jira cisbitaalka Carafaat “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Maamulka Jaamacadda Capital oo deeq dawo ah gaarsiiyey bukaanno ku jira cisbitaalka Carafaat “SAWIRRO”
Maamulka Jaamacadda Capital ee magaalada Muqdisho ayaa maanta deeq dawo ah oo isugu jirta faleebooyin iyo cirbado gaarsiiyay bukaano jiifa cisbitaalka Carafaat ee degmada Yaaqshiid, halkaasi oo lagu dabiibayo bukaanno uu soo ritay cudurka shuban biyoodka.
Ardayda iyo maamulka Jaamacadda ayaa kormeer ku sameeyay qeybaha uu ka koobanyahay cisbitaalka, kuwaasi oo qiimeyn ku sameynayay sida ay u kala daranyihiin bukaannada halkaasi ku jira.
Agaasimaha guud ee cisbitaalka Carafaat Dr Axmed Gacal Cali oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in bukaannada ku jira cisbitaalka ay xanuuno kala duwan qabaan, saacadihii la soo dhaafayna la soo gaarsiiyay bukaano hor leh oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka, kaasi oo ka dhashay biyo ay cabeen bulshada degmada Yaaqshiid ku nool.
“Saaka marka laga reebo 189 bukaan oo qaba kiisas kala duwan qaba ayaa cisbitaalka la keenay labo ka mid ah waa ay dhinteen, kuwa kalena waa ay caafimaad qabaan, tan kale bukaanadaasi intooda badan waan ku guuleysanay xaaladooda caafimaadna waa ay ka soo raynayaan sidii hore” ayuu yiri Dr Axmed oo ardayda iyo Maamulka Jaamacadda Capital uga mahadceliyay gurmadka ay u fidiyeen bukaannada cisbitaalka ku jira.
Guddoomiyaha Jaamacadda Capital University Dr Cabduqaadir Wehliye Afrax ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin ka qeyb qaadashada iyo caawinta bukaannada ku jira cisbitaalada Muqdisho, isago Alle uga baryay in uu caafimaad siiyo bukaannada ku jirta cisbitaalka Carafaat.
“Haddaan bahda Jaamacadda Capital intii awooddeyna ah in aan gacan ka geysano bukaanada la ildaran shuban biyoodka, in aan waalidkood kala qeyb galno murugada haysata, waxaan cisbitaalka keenay dawooyinka lagula tacaalo dadka fuuq baxa ku dhaca” ayuu yiri Dr Cabdiqaadir Wehliye oo ah hormuudka Jaamacadda.
Talaabadaan ay ardayda iyo Maamulka sare ee Jaamacadda Capital ugu gurmadeen bukaanada jiifa cisbitaalka carafaat ayaa ka dambeysay markii cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay qeybo ka mid ah degmada Yaaqshiid, taasi oo shantii maalin ee la soo dhaafay galaaftay nolosha dad fara badan, halka ay ilaa iyo iminka ay jiraan bukaanno kale oo la ildaran cudurka, taasi oo ardayda iyo Maamulka Jaamacadda ku noqotay mid uur ku taallo ah, maadaama ay ka xanuunsadeen dhibta haysa qoysaska ay carruurtooda waxyeelada ka soo gaartay biyaha ay cabeen.